Caawa & Daljir iyo Khadar Cawl Ismaaciil, Daljir Buuhoodle (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 15, 2017 8:02 g 1
Cawaysin wanaagsan! Ku soodhowaada barnaamijkii cawaysnimo ee Caawa iyo Daljir, waxaana xarunta Idaacadda Daljir ee magaalada Buuhoodle caawa ka soojeedinaya wariye Khadar Cawl Ismaaciil.
Wararka caawa ugu waaweyn Caawa & Daljir waa:
Laamaha ammaanka Muqdisho oo soo bandhigay khasaaraha weerarkii Pizza House
Madaxweyne Farmaajo e muxuu ka yiri weerarkii xalay?
Madaxweyne Gaas “Puntland ma ooydee waa aarsataa!”
iyo fikirka waxgaradka Mudug arrimaha wadahadalada Gaalkacyo
Qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso xambaarsan hoos ka dhegayso.
Ciidamada Ammaanka Bossaso: “Kontoroolka waxaan ku Qabanay Argagixiso Daacish”
Caawa iyo Tartan & Tacliin: Burtinle Sare fkf Xaaji Cali Biixi iyo waliba …
Khadar Cawl 2 years
Dhamaan xerta hala dhegayso oo lacagta ha isku ilaawina, Faadumo Taxadar Yuusuf Fatima Gaashaan Duniyo Awil AbdiAwil MohamudSamiira Aw-musse Sumayo Bintu Caynab Mohammed Omar Hussein Omar Osman